Iphrofayela Yenkampani - Shenzhen Bei Te Purification Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Beiter Purification Technology Co, Ltd. yasungulwa ngo-2016 ngenhloko-dolobha ebhalisiwe ye-RMB 5 million. Kuphumelele isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 ngoJulayi 2019.
Kuyifektri yobungcweti enikezelwe ekukhiqizeni, ekusetshenzisweni nasekuthengisweni kwamaphakeji anobungani bemvelo, izindwangu ezingalukiwe, iphepha elingenaluthuli neminye imikhiqizo yokuhlanza. Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka i-100% yamahhala epulasitiki evikela imvelo izikhwama / izikhwama (ukonakala kwemvelo ngokweqiniso, ukungcoliswa komoya, indwangu engenazintuli yezimboni), iphepha elinothuli nephepha lokuphrinta elingenaluthuli, iphepha le-SMT lensimbi lokusula iphepha, iphepha elinamathelayo, iphedi enamathelayo nomkhiqizo ohlukahlukene wokuhlanza i-anti-static.
Le mikhiqizo isetshenziswa kakhulu ekuhlanzweni kwezimoto, i-aerospace, amahhotela nezinsizakalo zokudla, imboni yokuphrinta, imboni ye-elekthronikhi, nezinye izimboni nezimboni zokukhiqiza.
Eminyakeni edlule, sithole ukwesekwa kumakhasimende amaningi avelele
IMECHATRONIC ASIA PACIFIC LTD
Ubunikazi: Imikhiqizo yethu inenqubo yokukhiqiza eyingqayizivele
Isipiliyoni: Isipiliyoni esicebile kumasevisi we-OEM ne-ODM.
Isitifiketi: Isitifiketi se-RoHS, isitifiketi se-SGS, isitifiketi se-ISO 9001
Ithimba Lensizakalo: ukuxhumana komuntu nomuntu, ikhwalithi yesevisi yokuqinisekisa, isevisi yamakhasimende ekhethekile, xazulula zonke izinkinga ohlangabezana nazo.
Nikeza ukusekelwa: ukuhlinzeka ngemininingwane yezimboni kanye noxhaso lokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe.
Umnyango we-R & D: Ithimba le-R & D lifaka ochwepheshe bemikhiqizo, abahloli bemikhiqizo emisha kanye nabakhi bokubukeka.
Ukukhiqizwa chain: Iminyaka engu-13 yesipiliyoni semboni, ngenqubo egcwele yokukhiqiza esezingeni eliphakeme, izindawo zokusekela eziphelele, ingahlinzekae ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme nezethembekile